Mavhesi makumi maviri eBhaibheri Erukuru nezve Mufaro | MINYENGETERO MARI
musha Mavhesi eBhaibheri Nhaurwa makumi maviri dzeMavhesi eBhaibheri Nezve mufaro
Nhaurwa makumi maviri dzeMavhesi eBhaibheri Nezve mufaro
10 Ipapo akati kwavari, Endai, mudye zvakakora, nokumwa zvinozipa, mugotumirawo migove kuna vasina kugadzirirwa chinhu, nekuti zuva rino dzvene kuna She wedu; uye musazvidemba. nekuti mufaro waIshe isimba rako.
The rufaro zvaIshe zvinopa simba. Mufaro chibereko chemweya. Anhasi epamusoro makumi maviri emaBhaibheri mavhesi nezve mufaro achakukurudzira iwe paunenge uchipfuura nematambudziko ehupenyu. Kana iwe uine mufaro muhupenyu hwako, haugone kutamiswa nemamiriro ekunze. Mufaro waIshe mumoyo mako ndiwo mushonga wekupererwa. Mweya mutsvene mweya wemufaro, Anoparadzira mufaro uye mufaro washe mumoyo yedu uye kuburikidza nesu. Paunenge uchiverenga mavhesi emubhaibheri emufaro nhasi ndiri kukuona uchigamuchira mweya wemufaro muzita raJesu. Fara, ndinoti zvakare fara.
Nhaurwa makumi maviri dzeMavhesi eBhaibheri Nezve Mufaro.
1. 1 VaTesaronika 5: 16-18:
16Farai kwazvo. 17 Namata usingaregi. 18 muzvinhu zvese tenda, nekuti ndiko kuda kwaMwari kuna Kristu Jesu pamusoro pako.
2. Zefania 3:17:
17 Ishe Mwari wako ari mukati mako ane simba; achaponesa, uchafarira iwe nemufaro; achazorora murudo rwake, achakufarira iwe nokuimba.
3. VaFiripi 4:4:
4 Farai muna She nguva dzose, uyezve ndinoti, Farai.
4. VaRoma 12: 12:
12 Kufara mutariro; tsungirira pakutambudzika; kuramba uchinyengetera;
5. Mapisarema 94:19:
19 Mundangariro dzangu zhinji mukati mangu Kunyaradza kwenyu kunofadza mweya wangu.
6. Mapisarema 118:24:
24 Rino izuva rakaitwa naShe; isu tichafara uye tinofara mairi.
7. Habhakuki 3: 17-18:
17 Kunyange muonde ukasatunga maruva, uye michero haingabereki pamizambiringa; Kubata kwemiorivhi kuchapera, uye minda haingabereki vanhu. Makwai achagurwa kubva mudanga, uye hapazovi nemombe mumatanga. 18 Kunyange zvakadaro ndichafara kwazvo muna Jehovha, Ndichava nomufaro muna Mwari woruponeso rwangu.
8. Mapisarema 16:11:
9. 1 Petro 1: 8-9:
Iye musina kumuona, munoda iye; maari, kunyange zvino musingamuoni, asi muchitenda, munofara nemufaro usingatauriki uye uzere nekubwinya: 8 muchigamuchira kuguma kwekutenda kwenyu, irwo ruponeso rwemweya yenyu.
10. Isaya 61:10:
10 Ndichafarira kwazvo muna Jehovha, mweya wangu unofara muna Mwari wangu; Nekuti akandifukidza nenguo dzeruponeso, akandifukidza nejasi rekururama, muwani unozvishongedza nezvishongo, uye somwenga unozvishongedza nezvishongo.
11. Johane 16: 24:
24 Kusvikira ikozvino hamuna kukumbira chinhu muzita rangu, kumbira uye muchagamuchira, kuti mufaro wenyu uzere.
12. 2 Vakorinde 9: 7:
7 Munhu wose sezvaanofunga mumoyo make, ngaazvipe; Kwete nekugunun'una, kana nekuda kwekuda; nekuti Mwari anoda unopa achifara.
13. 2 Vakorinde 12: 10:
10 Naizvozvo ndinofara muutera, mukunyomba, mukushaiwa, murushusho, mukumanikidzwa nekuda kwaKristu; nekuti kana ndisine simba, ndipo pandine simba.
23 Munhu anofadzwa nemhinduro yemuromo wake, uye shoko rinotaurwa nenguva yakafanira, rakanaka sei!
15. Mapisarema 32:7:
7 Ndimi chivando changu; muchandichengeta kuti ndirege kutambudzika; Muchandikomberedza nenziyo dzekununurwa. Selah.
16. VaRoma 12: 15:
Farai pamwe nevanofara, chemai nevanochema.
17. VaRoma 15: 32:
32 kuti ndiuye kwamuri nemufaro nekuda kwaMwari, uye ndive nemufaro.
18. Mapisarema 119:111:
111 Zvipupuriro zvenyu ndakazvigamuchira, kuti ive nhaka yangu, nekuti ndizvo zvinofadza moyo wangu.
19. VaGaratia 5: 22-23:
22 Asi chibereko choMweya ndirwo rudo, mufaro, rugare, moyo murefu, nyoro, kunaka, kutenda, 23 Nyoro, kuzvidzora;
20. Mapisarema 149:4:
4 nekuti Jehovha anofarira vanhu vake, Achashongedza vanyoro noruponeso.
Previous nyaya20 Minamato yeMinamato Yepfungwa Dzemweya
inoteveraMavhesi makumi maviri eVhesi Zvese pamusoro Penyasha
Minyengetero inopesana nekushushikana uye kunetseka
Mavhesi eBhaibheri ekunamata kana iwe uchinge uchida
Zvikonzero zvishanu Minamato Yako Isingapindurwe
20 Minamato yeminamato yekusimudzirwa kweVamwari